Harena an-kibon’ny tany : mitaky antontanisa ny FMI | NewsMada
Harena an-kibon’ny tany : mitaky antontanisa ny FMI
Par Taratra sur 29/08/2017
Nangata-baovao mikasika ny harena an-kibon’ny tany ny FMI. Mbola mihantona kosa ny famolavolana ny lalàna vaovao mifehy azy raha efa vita ny mikasika ny solika.
Nihaona tamin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny vokatra ara-tsolika, Zafilahy Ying Vah, ny solotenan’ny Tahirimbola irasiam-pirenena (FMI) miasa eto Madagasikara, Imam Patrick. Nilaza ity farany fa liana te hahafantatra bebe kokoa mikasika ny tontolon’ny harena an-kibon’ny tany eto Madagasikara ny FMI, ka anisan’izany ny antontanisa, ny tarehimarika samihafa manodidina azy. Te ahalala mikasika ireo orinasa sy fandaharanasa mikasika ny harena an-kibon’ny tany koa ity rafitra iraisam-pirenena ity, ireo efa miasa sy mikasa ho avy aty Madagasikara. Toraka izany koa ny tetikasa akaiky tsy mihoatra ny telo taona, ohatra. Eo koa ny olana samihafa eo amin’ity sehatra ity, sy ny vahaolana raisin’ny fanjakana.
Tena andraikitry ny FMI ny lafiny fitantanana ny toekaren’ny firenena amin’ny ankapobeny. Nangataka fanazavana tamin’ny minisitra Zafilahy Ying Vah ity solotenany ity mikasika ny anjara toeran’ny harena an-kibon’ny tany amin’ny harinkarena faobe (PIB). Nilaza ny minisitra fa efa nisy fotoana nahatratra 14% ny entiny, ary tokony ho mihoatra noho izany aza.
Hivoaka tsy ho ela ny lalàna mifehy ny solika
Noresahan’ny roa tonta koa mikasika ny solika. Nambaran’ny minisitra fa maro ireo orinasa miasa eto amintsika, saingy mbola ao anatin’ny dingan’ny fikarohana avokoa. Ny Madagascar Oil irery ihany no efa mitrandraka menaka mavesatra (fuel) any Tsimiroro. Mila fotoana maharitra ity sehatra ity satria maharitra valo taona farafahaingana ny fikarohana fotsiny.
Fantatra koa fa efa vita ny volavolan-dalàna mifehy ny solika, raha toa ka mbola mihantona ny an’ny harena an-kibon’ny tany.